Part 1: Gịnị mkpa ọcha si nchekwa na iPhone?
Nkebi nke 2: Clean iPhone nchekwa na 1 click
Nkebi nke 3: Olee otú iji Wondershare SafeEraser ọcha gị iPhone nchekwa
Bụ gị iPhone mgbe niile na-enye gị na "ezughị dị nchekwa" ịdọ aka ná ntị? Ọ bụrụ na ị ga-esi ndị na mgbe ahụ ị maara nnọọ otú manụ ha nwere ike ịbụ. Nke a bụ n'ihi na ha enweghị ezuru nchekwa nwere ike kpọrọ degrade ọrụ nke gị iPhone na-eme ogbenye arụmọrụ. Wezụga na-gị iPhone arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere ị ga-chọrọ ọcha gị iPhone nchekwa. Ụfọdụ n'ime ha bụ:
Nhicha gị nchekwa ga-enyere na gị iPhone ịrụ ọrụ na ezigbo mpaghara. Nke a pụtara na gị iPhone ga-anọgide na-eme dị nnọọ ka o mere mgbe ọ bụ ika ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị imelite iOS 9, na-enwe dị ọcha nchekwa ga-eme ka usoro na nnọọ mfe.
Nhicha gị iPhone nchekwa ga-adị n'elu gị ịrụ ọrụ ekwentị. Ọ bụrụ na ị nọwo na-na-na "ezughị dị nchekwa" ozi mgbe ahụ ị nwere ike chọpụtara na ọ na-ewe ogologo oge iji nweta obere ihe aga-eme rụzuru na gị iPhone. Nhicha gị nchekwa ga-ewepụ nsogbu a ozugbo na ihe niile.
Gwakwara elu gị iPhone si nchekwa ga-ekwe ka ị na-ọzọ na irè nchekwa maka ọhụrụ stof ị chọrọ. Ọhụrụ ahụ na-arụpụta ngwa na ị chọrọ ga-adị mfe ibudata na ga-arụ ọrụ a otutu mma.
Mkpa nke nhicha gị nchekwa-apụghị mesiri ezu. Ma-emetụtakwa ka ihe dị mkpa bụ otú ị ọcha gị iPhone si nchekwa. E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme ya ọ bụ ezie na ọ bụ mgbe niile kasị mma na-aga n'ihi na enem irè ụzọ ime ya. Dabara nke ọma n'ihi unu, e nwere ngwá ọrụ na-pụrụ inyere gị aka ime nke a n'ụzọ dị irè na nnọọ mfe.
Wondershare SafeEraser e mere iji nyere gị na nhicha gị iPhone nchekwa. Nke a software ga-enyere gị mezuo nke a niile dị mkpa ọrụ dị nnọọ mfe nzọụkwụ dị ka anyị ga-ahụ a obere ka e mesịrị. Ụfọdụ n'ime atụmatụ na-eme Wondershare SafeEraser nnọọ irè na-agụnye;
The software-enyere gị aka n'enweghị ere ma ọ bụ egweri gị iPhone n'achọghị banyere ihe ọ bụla nke ozi nkeonwe gị na-n'ime ihe ọjọọ aka. Nke a bụ n'ihi SafeEraser ga-ehichapụ niile ụzọ ka mwute ozi dị ka ichekwa ego na bank ọmụma na mwute ozi ịntanetị.
Ọ na-ekwe ka ị na-na-adịgide adịgide ihichapu data ị na-achọghị na gị iPhone
Ọ na-enye gị ohere iji na-adịgide adịgide mfe ngwaọrụ gị
I nwekwara ike iji SafeEraser onwe elu ohere na na-na ngwaọrụ gị arụmọrụ na ezigbo larịị.
SafeEraser eji US Military ụzọ nke na-ebibi onwe data n'ịhụ na ọ bụ unrecoverable.
SafeEraser dị mfe iji dị ka anyị kwuru n'elu na-atụle otú ọ dị mkpa ka ị na-Iphone nchekwa dị ọcha, ọ dị mkpa na ọ iPhone eji ọ bụghị nanị nwere Wondershare SafeEraser na ha ma na-na ha maara otú iji ya. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ iji SafeEraser mfe na n'ụzọ dị irè.
Nzọụkwụ 1: Anya isi na ị ebudatara na arụnyere SafeEraser gị na kọmputa, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri cables. Wondershare SafeEraser ga-amata ngwaọrụ gị na ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Dị ka ị pụrụ ịhụ n'ụzọ doro anya, gị iPhone ga-egosipụta na ekpe na 5 atụmatụ ịhọrọ site na ekpe.
Nzọụkwụ 2: Site 5 nhọrọ, ịhọrọ 1-pịa Hichaa atụmatụ. Pịa na 1-Pịa Hichaa mma na ihe bụ isi window n'elu.
Nke a ga-ịkpalite akpaka Doppler nke gị iPhone dị ka e gosiri n'ebe a.
Nzọụkwụ 3: Otu akpaka scanning zuru ezu; niile nke gị junk faịlụ ga-egosipụta na nke pụrụ ịkpata window. Ị nwere ike wee pịa na nzacha na mkpocha onwe elu disk ohere.
Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-ngwaọrụ gị ejikọrọ n'oge dum usoro iji hụ na usoro a na-agwụ agwụ n'ụzọ ziri ezi.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo usoro bụ zuru ezu Wondershare SafeEraser ga-enye gị ozi na gị iPhone si ọnọdụ site na-egosipụta na-esonụ window.
Ị nwere ike mgbe ahọrọ pịa "n'ụlọ" laghachi na Ihuenyo ma ọ bụ i nwere ike pịa "rescan" ka iṅomi ngwaọrụ gị maka achọghị junk faịlụ ọzọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ n'ụzọ doro anya, usoro dị mfe iji wuchaa na gị iPhone na-adị mfe kpochara nke na-achọghị junk faịlụ. Na ọtụtụ ikpe ndị a junk faịlụ ndị ihe ime ka gị iPhone arụmọrụ erughị stellar. Gịnị bụ ọbụna ihe ọzọ uru bụ na i nwere ike ikwugharị usoro a nile ọzọ dị iche iche na etiti oge otú ị mgbe nwere iji na-enweta "ezughị dị nchekwa" ozi na gị iPhone ọzọ.
Wondershare SafeEraser dị maka Windows na Mac OS na dị mfe ibudata ma wụnye, ọ bụghị banyere ọ bụ ukwuu irè ma dị mfe iji.
Importing music si iPhone ka iPod, iPad na iPhone
> Resource> iPhone> esi ọcha iPhone Nchekwa